अबको ३ वर्षसम्म यी ४ राशिहरुलाई हुनेछ धन लाभ ! जान्नुस् , कुन कुन राशी हो ? – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१४:१०
काठमाडौ । ज्योतिषी शस्त्रीका अनुसार आफ्नो राशी अनुसार पनि तपाइको जीवन कति लाभदायक बन्ने भन्ने निर्भर रहन्छ । त्यसमा कुनै बेला केही राशीहमा शुभ समय रहेको हुन्छ भने कुनै बेला केही राशीमा अशुभ समय रहेको हुन्छ । त्यस्तै यी ४ राशीहरुमा अबको ३ वर्षसम्म लाभै मात्र हुनेछ । आजको रातको १२ बजे देखि ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहनेछ । कुन कुन राशी हुन् ?हेरौ
कन्या राशी हुनेहरुको लागी अबको ३ वर्षको समय अति नै लाभदायक रहेको छ । अध्ययन तथा प्रेममा सफलता मिल्नेछ । तनाव र दबाब कम भई आँटे चिताएको काम पुरा हुनेछ । तर हल्का सचेत भने रहेर नै कामको थालनी गर्नुपर्नेछ ।
यो राशी हुनेहरुको लागी पनि अबको समय शुभ नै रहेको छ । कडा मिहेनत र आत्माबलले लक्ष्यमा पुयाउनेछ । तर मन हल्का केही कुरामा अल्मलिने भएकाले थोरै होसियार चाहि हुनुपर्छ । त्यसैले कसैको हल्लाको भरमा नलागी आफ्नै निर्नयमा अडिग हुनुहोला । तर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अपार सफलता मिल्नेछ ।
यो राशी हुनेहरुको पनि समय राम्रै रहेको छ । व्यापारमा प्रशस्त धनलाभ हुनेछ । नयाँ र रचनात्मक काममा ध्यान जानेछ । साथीभाई र आफन्तजनको सहयोग मिल्नेछ । तर परिश्रम गर्न भने नछोडनुहोला ।
यो राशी हुनेहरुको लागी पनि शुभ नै समय रहेको छ । अध्ययन र स्वास्थ्यमा राम्रो हुनेछ । तपाईको रोकिएको कामहरु बन्नेछ । मिहेनतले आर्थिक रुपमा पनि लाभ मिल्नेछ । तर भाग्यमा भन्दा पनि बढी कर्ममा विश्वास गर्नुहोला ।